Booliiska Somalia & RW Hindiya oo iska kaashaday soo furashada gabar Hindi ah oo Muqdisho ku afduubnayd (Akhri sheekada) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Booliiska Somalia & RW Hindiya oo iska kaashaday soo furashada gabar Hindi...
Booliiska Somalia & RW Hindiya oo iska kaashaday soo furashada gabar Hindi ah oo Muqdisho ku afduubnayd (Akhri sheekada)
(Muqdisho) 01 Abriil 2019 – Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa ku guuleystay in ay soo badbaadiyaan Gabar Hindi ah iyo Saddex carruur ah oo ay dhashay oo afduub loogu heystay magaallada Muqdisho.
Gabadhan 31 jirka ah oo Muslimad ah, kana soo jeedda Hyderabad ee Hindiya ayaa waxaa lagu magacaabaa Afreen Begum, waxaana Muqdisho lagu heystay tan iyo Luulyo, 2018.
Gabadhan ayaa waxaa heystay qoyska ninka ay ubadka u dhashay oo Soomaali ah, waxaana iyada iyo carruurteedu ay maanta 2:40 pm ka duuleen Muqdisho iyagoo ka degay Addis Ababa, halkaas oo berri ay ka qaadan doonaan duulimaad ku sii jeeda Mumbai Airport.
Sida sharciga Soomaaligu uu dhigayo waalid keligii ah carruur kalama duuli karto garoonka diyaaradaha, iyadoo aan ogolaansho laga haysan waalidka labaad ee ubadkaa dhalay.
Maxamed Xuseen Ducaale oo wata Baasaboor Canadian ah ayaa waxa uu Afreen ku guursaday 2013 magaalada Hyderabad, halkaas oo Maxamed uu u shaqeynayay shirkad gaar loo leeyahay.
4 Luulyo 2018, ayaa qoyskani waxa ay go’aansadeen in ay Soomaaliya aadaan si Afreen ay u soo barato qoyska ninkeeda.
Bartamihii Febraayo 2019 gabadhan Hindida ah Aabeheed Syed Gafoor Ali oo darawal Mooto Bajaajle ka ah Hyderabad, ayaa markii uu helay khabarka gabadhiisa waxa uu la xiriiray laamaha amaanka Hindiya oo uu ka dalbaday in gabadhiisa loo soo bad baadiyo.
Howlgalku aad buu u cuslaa, maadaama aysan Hindiya safaarad iminka ku lahayn Xamar, in dowladda Soomaaliya lala xiriiro oo ay kiiskaasi soo furdaamiso lama huraan ayay noqotay, illaa markii dambe lagu guuleystay.
Previous articleBaro 5 nooc oo ka mid ah hubka halista ah ee Maraykanka oo ay Israel jeclaan lahayd balse aysan haysan + Sawirro
Next articleXOG: Waa midkee dalka uu Danjiraha ka noqonayo Md Cameey?